China New Technology Technology Vitamin C Shower FIlter Mugadziri uye Mutengesi | Xinpaez
Nyowani Technology Inonhuwirira Vitamin C Shower FIlter
6 AROMA Hwema - Kubatsira iwe kuzorora muviri wako wakaneta uye wakashushikana pfungwa
Ganda & Bvudzi KUSIMBISA - inovandudza kunyorova, kupora, kuchena, uye kusimba kweganda
Yakapfumisa VITAMIN C - Vitamin chinongedzo kubva kune vhitamini gel chinobvisa 99.9% yakasara chlorine uye Iine antioxidation mhedzisiro uye inopa vitamini kune rako ganda
Inoshanda FILTER - Inobvisa ngura & zvinokuvadza kubva pombi yemvura zvinobudirira
Miganhu: 133 * 46 MM
Zvinhu zveShell: Polycarbonate (PC)
Feature: Mafuta Vitamin C
"Transparent Metal" Shell
Kutaura nezve Filter Shell Material, Kuenzanisa PC neABS, PC ndiyo yakanakisa kusagadzikana-kwepurasitiki. PC ndeyeyeinjiniya mapurasitiki nemutengo wakakwira, asi PC ine yakanakisa magetsi ekuputira zvivakwa uye zvemuchina zvivakwa, kunyanya kukanganisa kusagadzikana, kukwirira kuomarara, hwakawanda hwekushanda tembiricha renji (-100 ～ 130 ℃) uye kujekesa kukuru (kunozivikanwa se "Transparent simbi"), isina-chepfu, nyore kugadzirisa uye kuumba. Iyo haingogone chete kutsiva zvimwe simbi, asi zvakare girazi, huni, nezvimwewo PC haina kupokana nehydrolysis, PC kupisa kuramba ndeye 130, ABS kupisa kupikisa 80 madhigirii, kuita kwese kwePC kuri nani.
Chenesa ganda rako！
Vitamin C inoshandiswa mune yekugeza firita, nekuti inogona kuramba ultraviolet mwaranzi kune imwe nhanho, kugadzirisa mamiriro erima makwapa uye mabara, nekudaro ine machena maitiro. Zvigadzirwa zvekuchengetwa kweganda zvakapfuma muvhitamini C zvinogona kubatsira ganda kudzivisa mwaranzi yevivi muzhizha, kusimudzira ganda metabolism, uye kudzivirira mavara akasviba uye mavara e pigment. Munguva yechando, inogona kugadzirisa kudzikama kwekutenderera kweropa kwakashata paganda, kuti iwe ugonewo kuve wakachena uye uchipenya munguva yechando.
Mushure mekugeza neshamba iyi, kumeso kwako kunonzwa kutsvedza uye ganda rako rinonzwa kutenderera. Hunyoro hweganda huchawedzera zvakanyanya mushure mekushandisa.
1.Iine hukuru hwevhitamini C, 45000mg, inova nguva mazana 800 emamoni '. Kamwe kana mvura yapinda, inozopa hombeaminamin C. Zviri pachena Kubvisa chlorine.
2.Moisturizing mhedzisiro inokupa wakatsetseka, munyoro uye hunyoro ganda.
3. Deredza kunetseka uye kuneta.
Chlorine kubvisa kunodiwa
Iyo yakasara chlorine iri mupombi yemvura inoburitswa nyore nyore kubva mumhepo panguva yekugeza uye inoramba iri mune isina mweya yekugezera. Kugeza kwemaminetsi gumi kwakafanana nekunwa 1L yemvura. Icho chokwadi ndechekuti huwandu hweklorini inosvirwa kubva mumhepo panguva yekugeza inopfuura iyo yekunwa.
Vitamin C Inoshanda Sei?
Iyo nzira yeNeutralization. Vitamin C kemikari ine kuderedzwa kuti igone kusiyaniswa neklorini. Vitamin C inogona kudzikisa Cl2 kuenda kuCl-, iyo yakasanganiswa kuita oxidizing vhitamini C yega. Izvi zvinofanirwa kuitwa mumvura, uye mhedzisiro yacho haina kunaka mune yakasimba mamiriro.
Iyo firita yemukati mukati megobvu inogona kutsiviwa. Kana iyo firita musimboti yashandiswa kumusoro, isu tinongoda kutsiva iyo firita moyo. Neimwe nzira, tinogona kuchengetedza yakawanda mari nesimba. Tinofanira kuzvitsiva kangani? Zvakanaka, zvinoenderana. Kazhinji kutaura, chinhu chimwe chesefa chinogona kupa kunatswa kwemvura inosvika 6000L, iyo inogona kushandiswa kumhuri yevashanu kushamba kwemwedzi mumwe chete.
Iyi Model ndiyo yedu huru dhishi inogadzirwa mufekitori yedu. Tine chitambi asi hatina kuisungirira. Nekuti isu tinopa OEM pane ino, inosanganisira yakazara yakazara magadzirirwo. Isu tinoratidzira prototype, uye imwe nzvimbo yasara kune ako mafungiro, Logo, sefa chinhu uye goko, zvese zvinogadziriswa. Kana iwe usina zano, isu tine yedu dhizaini timu yekukuraira iwe, hongu isu zvakare tine stock zvakare, ndapota isa odha kana uchida. Parizvino takawana zvitupa zveMSDS neSGS pane iyi modhi inoratidza pazasi. Ndatenda iwe nekushivirira kwako, sekusvika kwako apa. ^^
Pashure: Yakasarudzika Carbon Fiber Shower Musoro Ine Sefa
Zvadaro: Nyowani Tekinoroji ceramic zvicherwa inochengetwa shawa musoro ine sefa
munhuwi shawa Sefa
shawa musoro firita
shawa remvura yekugeza
Vhitamini C yekugeza sefa
Yakasarudzika Carbon Fiber Shower Musoro Ine Sefa